‘महाकाव्य लेख्दैमा महाकवि भइन्न !’ – डिल्लीराज अर्याल – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
‘महाकाव्य लेख्दैमा महाकवि भइन्न !’ – डिल्लीराज अर्याल
मैले केही विद्वान् मित्रहरूले भन्ने गरेको- ‘वर्णन कविता होइन’ – ‘महाकाव्य लेख्दैमा महाकवि भइन्न’ जस्ता भनाइ सुन्ने गरेको छु । आखिर कुरोको चुरो के हो त? भनेर सोच्ने पनि गरेको छु । के वर्णन गरेर लेखिएका कविता कविता नबन्न, नभनिन मिल्छ ? सक्छ? के महाकाव्य लेखेर पनि महाकवि नहुन नबन्न मिल्छ ? यस्तै सोचमा परेर केही लेख्न लागेका बेला जब बिजुली चम्कन्छ, बिजुली जान्छ, मेरो मन बिथोलिन्छ र बिजुलीतिर केन्द्रित हुन्छु ।
सोच्छु – यो ‘बिजुली’ अर्थात् विद्युत्, संस्कृतले यसलाई तडित् पनि भन्छ । तडित् र त्वरित उस्तै लाग्छन्, संस्कृतमा तडित्को अर्थ बिजुली भए जस्तै त्वरित्को अर्थ छिटो हुन्छ । कतै तडित् त्यसैबाट प्रभावित त होइन ? छिटो आउने र छिटै जाने ।
गड्याङगुडुङ् गर्दै आकाश गर्जँदै गर्दा कसरी झिलिक्क आउँछ, संसारै उज्यालो गराउँछ र उत्तिखेरै हराउँछ ! आए, गएको हिसाब गर्नै नभ्याइने गरी आउँछ र गइहाल्छ । आउँदा आँखैले काम नगर्ला जस्तो गराइदिने बिजुलीको आयु देखेर दङ्ग पर्छु म । अरू पनि पर्दा हुन् तर सबैको कुरो बताउन गाह्रो हुन्छ, आफ्नो जस्तो सजिलो हुन्न । हुनत कतिपय कुरा अरूको बताउन सजिलो र आफ्नो चाहिँ गाह्रो पनि हुन्छ । यो बिजुलीको उज्यालोको प्रभाव भने त्यस्तो अलि होइन कि ! बिजुली पनि फरक फरक हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ । उता त्यो बिजुली, यता अर्को बिजुली छ हाम्रा गाउँघरमा, शहर बजारमा । छन त त्यो पनि यस्तै छिटो छ । आउने र जाने गरिरहन्छ । हाम्रा गाउँघरतिर ‘बिजुली’ को अर्थ ‘छिटी’ भन्ने पनि हुन्छ, सबै काम कुरामा ढिलो नगर्नेलाई ‘बिजुली’ भन्ने गरिन्छ । हामी पनि यही भन्थ्यौं र यस्तै बुझ्थ्यौँ तर यसको अर्थ र स्वरूप त भिन्न पनि हुने रहेछ । यो अहिलेको अनुभव हो, ज्ञान हो ।
हाम्रा गाउँ घरमा, शहरबजारमा बाल्ने बिजुलीको दर्शन दुर्लभ हुँदै गएपछि ‘बिजुली’ भन्ने अभ्यास पनि कम भएको हो कि ! यो मेरो अनुमान हो । म हनुमान होइन त्यसैले मसँग त्यस्तो भक्ति छैन तैपनि अनुमान गर्ने र बोल्ने शक्ति छ । त्यसको प्रयोग गरिहाल्छु ।
अँ त हामी कहाँ पनि बिजुली थियो, छ भन्ने सुनेको थिएँ । सुनेको यस अर्थमा कि कुलमान विद्युतको नायक बनाइनु अघिसम्म बिजुली आउन गाह्रो मान्थ्यो । आउनै गाह्रो मान्ने भएकाले देख्नै कठिन हुन्थ्यो अनि त्यसका कुरा सुन्ने बाहेक के हुनु ?
विद्युत् भनेको बिजुली हो भन्ने कुरा त माथिको भनाइमै आइसक्यो । कोठामा, घरमा, चोकमा बालिने त्यो बिजुलीको आधार विद्युत शक्ति हो । त्यो शक्ति बल्बमा प्रकट हुन्छ । बल्ब अडिन होल्डर, होल्डर अडिन भित्तो, पर्खाल वा काठ कुनै न कुनै आधार चाहिन्छ त्यस्तै हरेक बस्तुलाई अडिने आधार चाहिन्छ । त्यही आधारमा अडिएको बल्बले बिजुलीको स्वरूप देखाउँछ । बल्बमा बिजुली शक्ति आउँदा उज्यालो हुन्छ । एक अर्काका आधारमा त्यसको अनुभूति हुन्छ । कतै कविता-काव्यमा पनि त्यस्तै पो हुने गरेको हो कि? त्यो आधार चाहिने कुरा सूक्तिमा पनि लागू हुने हो कि !
विद्वान् मित्रहरूको तर्क ‘कविता वर्णन होइन, वर्णनमा कविता हुन्न’ मा म घोरिन्छु र मेरो सोचाइ बेग्लै भएको अनुभूति गर्छु । मलाई त्यो तर्कमा अलि अपुग भएको अनुभूति हुन्छ । म कवितामा सूक्ति आउन, महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति आउन, ल्याउन वर्णन पनि आउँछ, चाहिन्छ भन्छु । वर्णन र सूक्ति दुवै कविताकै अङ्ग हुन्, कवितै हुन् भन्ने मान्छु । जसरी प्राण अडिन शरीर चाहिन्छ, बिजुली बल्न, उज्यालो पार्न बल्ब चाहिन्छ त्यसरी नै कवितामा सूक्ति अडिन वर्णन पनि चाहिन्छ । प्राण र शरीर दुवैको संयोजन भएर प्राणी हुन्छ । बल्ब र विद्युत् प्रवाहको संयोजन भएर उज्यालो आउँछ, प्रकाश देखिन्छ । हामी आफै पनि प्राण र शरीरको संयोजनमा बनेका हौँ । तिनलाई अलग्याउन सकिन्न, अलग्याउने हो भने हामी अथवा हाम्रो अस्तित्व रहन्न । त्यस्तै गरी वर्णन र सूक्ति हुन् जस्तो लाग्छ मलाई । बिजुली र बल्ब, मेघ र बिजुली, शरीर र प्राण जस्तै लाग्छन् मलाई कविता र भाव, शब्द र अर्थ, वर्णन र सूक्ति पनि ।
त्यसैले म यसरी बुझ्छु । बुझाइ फरक-फरक हुन सक्छन् । मान्यता, विश्वास फरक हुन सक्छन् तैपनि कतिपय कुरा एउटै हुन्छन् जसलाई बुझ्दै जाँदा बल्ल स्वीकार गरिन्छ ।
प्रकाशित मिति: 2019-03-11 2019-03-11 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged डिल्लीराज अर्याल महाकवि महाकाव्य
‘बालप्रज्ञा’ प्रकाशित हुने
छोलिङ गुम्बाका मूर्ति चोर्ने दुई जना पक्राउ गरी सार्वजनिक
नेकपा पाँचथरले स्थानीय तहमा पार्टी एकता टुङ्गो लगायो
जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रका स्वाथ्यकर्मीले तलब पाएनन्
‘मेरो मानहानी भयो, क्षतिपूर्ति माग्दै अदालत पनि जानसक्छु’
Tags: डिल्लीराज अर्याल, महाकवि, महाकाव्य